Lixabiso Sheet iindawo metal welding mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Izinto ngokubanzi zokwenza iphepha ngetsimbi zezi: intsimbi kwalenza, intsimbi engatyiwa, inkcenkce, intsimbi yasentwasahlobo, ubhedu nobhedu ingxubevange, ingxubevange wemagniziyam, aluminiyamu ingxubevange ipleyiti abandayo liqengqiwe, eshushu liqengqiwe ipleyiti, ipleyiti kwalenza, ipleyiti electrolytic, ipleyiti aluminiyam, intsimbi engatyiwa, ipleyiti yobhedu. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa i-welding yombane kunye ne-welding yegesi, kunye ne-laser welding, i-brazing, i-welding ye-thermal, i-electron beam welding, i-welding, njl njl.
Izinto eziluncedo zamalungu wentsimbi sheet ukuwelda
- Gcina izinto zesinyithi kwaye unciphise ubunzima besakhiwo;
-Lula inkqubo yokuqhubekeka kunye nofakelo kwaye uphucule ukusebenza kwemveliso;
Amandla omgangatho ophezulu kunye nokutywinwa ngokudibeneyo; ukubonelela ngokuguquguquka okukhulu kuyilo lolwakhiwo;
- Inkqubo ye-welding kulula ukuyilungisa kwaye isebenze.
Inkonzo ye-Ouzhan ye-OEM eyenziwe ngokwezifiso zentsimbi ye-welding service-China Shanghai sheet metal welding parts manufacturer
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Sinokuqhubekeka ngokuchanekileyo ngokuchaneka kweentsimbi zentsimbi kunye nomgangatho ozinzileyo nothembekileyo ngokweemfuno zabathengi. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwamaphepha e-welding sheet. Ukongeza, iimveliso zentsimbi yesinyithi zibonelela ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngeshiti kunye neemveliso zentsimbi kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Imimandla yesicelo se-welding sheet yentsimbi
Iindlela ezahlukeneyo ze-welding zilungele izinto ezahlukeneyo:
Welding Gas: carbon intsimbi ephantsi, ingxubevange nzima ubhedu, njl
I-electrode arc welding: intsimbi enganyangekiyo, ubhedu obomvu, i-alloy enzima, njl.
Ukuntywila kwi-arc welding:
Carbon dioxide igesi ukhuselo welding: obhityileyo ipleyiti iwelding
IArgon arc welding: titanium alloy, Al alloy, njl.
I-Plasma welding: i-air duct, ibhokisi ye-capacitor, njl.
Ukunyibilikisa i-Electroslag: iinqanawa ezinkulu zoxinaniso ezibiyelwe ngodonga, njl.
Indawo iwelding: ukugqagqana kwamalungu okunyathela amaphepha kunye nemivalo yokuwela, njl.
I-welding welding: iinxalenye zensimbi ezincinci
Ukuqokelela i-welding: i-T-shaped welding, i-pipe crossing, njl.
Ukudibanisa i-Butt: iileyili, njl.
Ukuqinisela ukuwelda: iirotor, imikhono, njl.
IBrazil: intsimbi ekhawulezayo, iinjini, njl.
Zeziphi izinto zokusetyenziswa kweentsimbi zentsimbi
Eyona njongo iphambili yokudibanisa kukudibanisa izinto ezincinci zentsimbi zibe nkulu (ngokwemizobo okanye ubungakanani obufunekayo), okanye ukwenza ijiyometri efunekayo ngokudibanisa (iwelding). I-Welding, ekwabizwa ngokuba yi-welding okanye i-welding, yinkqubo yokuvelisa kunye netekhnoloji yokujoyina isinyithi okanye ezinye izinto ze-thermoplastic ezinje ngeplastikhi ngokufudumeza, ubushushu obuphezulu okanye uxinzelelo oluphezulu.
Izinto eziluncedo Ouzhan sheet metal welding inkonzo
- Yonke into echanekileyo yokunyusa isinyithi iphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
- Ngokwemizobo okanye iisampulu zokwenza imveliso ye-welding sheet echanekileyo.
Egqithileyo Icandelo lokunyathela iphepha lesinyithi
Okulandelayo: Elungiselelweyo sheet metal iindawo welding